I-Garcinia Cambogia Yophula Ubunzima Ngokwempahla Yokulahleka Kwisisindo | AASraw Fat Loss
I-Garcinia Cambogia Yophula I-Powder Ukuze Ulahlekelwe Isisindo
/Blog/Garcinia Cambogia Extract/I-Garcinia Cambogia Yophula I-Powder Ukuze Ulahlekelwe Isisindo
ezaposwa ngomhla 03 / 31 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Garcinia Cambogia Extract.
Yonke into malunga neGarcinia Cambogia I-extract powder
1.Garcinia Cambogia I-powder powder
2. I-Hydroxycitric Acid yokuLawula ukuTyekela - I-Sauce eyimfihlo ye-Garcinia Cambogia esebenzayo I-extract powder?
I-3.Garcinia Cambogia I-extract powder?
I-4.I-Garcinia Cambogia I-extract powder?
I-5.Ingakanani i-Garcinia Cambogia I-extract powder?
6.Garcinia Cambogia I-Extract powder Benefits
7. Indlela yokuthabatha i-Garcinia Cambogia Yenza i powder ukuze ikhuphule iiNzuzo?
8.Potential Garcinia Cambogia Khipha ipowder powder Side Side Effects
I-9.Garcinia Cambogia I-powder powder?
10.Can Forskolin kunye neGarcinia Cambogia I-Extract powder Iya kubandakanywa?
11. Ngaba unako ukuthatha i-Garcinia Cambogia i-Extract powder? Kunye nobhontshisi wekhofi oluhlaza ngexesha elifanayo?
12. Yintoni enye ongayaziyo malunga neGarcinia Cambogia I-extract powder? Powder?
13. Yintoni Yokujonga Xa Uthenga I-Garcinia Cambogia I-Extract powder?
14. I-AASraw - I-Garcinia yaseCargia yaseGermany I-Extract powder Brand
I-Garcinia Cambogia I-extract powder ividiyo
I.Raw Garcinia Cambogia Yophula i-powder isiseko Abalinganiswa:
igama: I-Garcinia Cambogia I-extract powder
I-molecular Formula: C16H21BrClNO4
I-Garcinia Cambogia I-powder powder (GC) isityalo esincinci, esinjengomququ ekhula kwi-Asia-mpuma ye-Asia ne-Indiya. Isithako esisisiseko esisisiseko esitholakalayo kwintonga I-Garcinia Cambogia Yenza i-powder extract i-hydroxycitric acid (HCA), apho uphando oluthile lunokuthi luncede abantu abathile banciphise umzimba.
Okwangoku, Kukho ezininzi iimveliso zokulahleka komzimba ezibhalwe kunye neGarcinia Cambogia I-extract powder powder. Uninzi lwabantu ludityaniswe kwingcamango yokusebenzisa i-GC ngenxa yokunceda ukuba ikwazi ukubonelela ngokukhawuleza, ukulahleka kwesisindo esheshayo ngaphandle kwesidingo sokutshintsha ukutya komntu wonke okanye indlela yokuphila kakhulu.
I-GC ngokwayo ayilona mveliso mtsha; Enyanisweni, sele idliwe kwiindawo zaseAsia iminyaka emininzi, nangona kungenjongo yokulahlekelwa ubunzima. Ekubeni i-GC (ngokuqhelekileyo yaziwa nangokuthi iMalabar tamarind) kuqala yaqala ukuthandwa kubantu baseMelika iminyaka emininzi edlulileyo-emva kokuvela rhoqo kumajelo eendaba nakwiimiboniso zeTV ezihambelana nempilo - ukuthengiswa kuye kwenyuka ngokuphawulekayo. Abantu abaninzi banokuthenga oku kuthiwa "ukulahleka kwemithwalo yezilwanyana ezinomzimba" ngokuthemba ukulahlekelwa ngumzimba onenkani kunye nesisu esiswini abaye bajamelana nazo iminyaka.
Kodwa njengamanye amaninzi ukuxhaswa kwesisindo, iipilisi kunye neemveliso, iziphumo malunga nemiphumo yeGC kunye nokhuseleko zixutywe. Nangona kukho ubungqina bokuba i-HCA inokukwazi ukuncedisa ekulahlekeni kwesisindo nangona umntu engayisebenzisi ngokuphindaphindiweyo okanye utshintshe ukutya kwakhe okuninzi, kukho ukukhathazeka malunga nemiphumo emibi engenzekayo, kubandakanya ukulimala kwesibindi okanye ukungaphumeleli, ukuxhalaba, ukukhathala , utywala, kunye neengxaki zokutya.
Khumbula ukuba ngenxa yokuba i-GC isuka kwisiqhamo sendalo ayithethi ukuba ihlale ikhuselekile ngokupheleleyo. Ngako oko uGarcinia Cambogia Utshintshe i powder powder ekugqibeleni ufanele uzame? Iyintoni inyaniso kunye nale ncediso yokunciphisa umzimba? Makhe sijonge indlela i-HCA isebenza ngayo, kwiimeko zini i-GC inokuba luncedo, kwaye yintoni iimpendulo ezingathintekiyo ezinokwenzeka xa usebenzisa naluphi na uhlobo lwesisindo sokulahlekelwa kwesisindo. Ekugqibeleni, kubalulekile ukuba sicinge ukuba ixesha kunye nexesha siyabona iintlobo ezahlukeneyo zokutya kunye neemveliso ezipapashwa ukunyusa ukulahleka kwesisindo - kodwa oko kusebenza ngokusisigxina ekude siphile impilo ephilileyo.
2. I-Hydroxycitric Acid yokuLawula isisindo - I-Sauce eyimfihlo ye-Garcinia Cambogia ephumelelayo I-powder powt Extract Powder
Isiqhamo esicacileyo sesi siqhamo esiluncedo ekulahlekeni kwesisindo ngu-hydroxycitric acid - kunye ne-Garcinia Cambogia I-powder powder empeleni yayingumthombo wokuqala wendalo. I-hydroxycitric acid isacinga ngokuphandle, kodwa uphando olugqityiwe ngoku lubonisa ukuba lusebenza ngokuthintela ekunciphiseni nasekunciphiseni ukwakhiwa kwezicubu ezinamafutha, ngokukodwa kwisisu.
Oku kuthetha ukuba I-Garcinia Cambogia I-extract powder inhibits lipogenesis - inkqubo apho umzimba udala amanqatha - kwaye ke ke ithuluzi elisebenzisekayo lokulwa nokukhuluphala okanye nayiphina ingxaki enxulumene nesisindo. Ukuphononongwa kwangoku kweemvavanyo ezininzi zekliniki kuye kwaqinisekisa ukuba le mveliso inefuthe eliyinyani nefuthe ekuzuzeni ubunzima, kwaye akukho miphumo emibi eye yaboniswa kumanqanaba omlinganiselo anconywayo. Amaninzi amaninzi asebenzayo kunye neqinileyo e-Garcinia Cambogia Ukucoca ama powder kunye nezibonelelo zinezinye izithako kunye ne-hydroxycitric acid ngokwayo. Ezinye zezi zongezo zinokukunceda ekusebenziseni isithako esisebenzayo, ngelixa ezinye zinganqweneleka.
3. I-Garcinia Cambogia I-extract powder Ukukhupha i powder Ukuhla ukusinda
Uninzi lwezifundo zabantu eziphakamileyo ziye zavavanya imiphumo yokulahlekelwa kwesisindo seGarcinia Cambogia. Ngaphezu koko, uninzi lwawo lubonisa ukuba ukuncedisa kunokubangela ukuba ixabiso elincinci lokulahleka komzimba. Eli grafu lisishwankathela ukulahleka kwesisindo kwiziphumo ezilisithoba I-Garcinia Cambogia Yenza i powder powder powder:
Imibhobho ebomvu ibonisa iziphumo ezivela kumaqela ezongezelelweyo, ngelixa iibhanki ze-orange zibonisa iziphumo zeqela le-placebo. Ngokomyinge, iGarcinia Cambogia I-Extract powder ikhupha i powder iboniswe ukuba ibangele ukulahleka kwemilinganiselo yeeplani ze-2 (i-0.88 kg) ngaphezu kwe-placebo, ngaphezu kwexesha leeveki ze-2-12. Oko kwathiwa, uphando oluninzi alufumananga naliphi na ukulahlekelwa kwesisindo.
Ngokomzekelo, isifundo esikhulu somntu ngamnye, esivavanya abathathi-nxaxheba be-135 kwiiveki ze-12, akafumani nantlukwano ekulahlekeni kwesisindo phakathi kweqela elithatha i-Garcinia Cambogia I-extract powder ikhupha powderand iqela elithatha i-placebo. Njengoko ubona, ubungqina buxutywe. I-Garcinia Cambogia I-extract powder extract powder inokuvelisa ukulahleka komzimba kwabanye abantu, kodwa ukuphumelela kwabo akunakuqinisekiswa.
4. Ingaba uGarcinia Cambogia Yenza i powder isicatshulwa powder ku sebenza ukulahleka kwesisindo?
Kukho iindlela ezimbini eziphambili i-Garcinia Cambogia I-extract powder i-powder powder iyasebenza ngokulahleka kwesisindo.
1. Inokunciphisa Ukutya Kwakho
Uphononongo kwizigulisi ubonise ukuba abo banikwe I-Garcinia Cambogia I-Extract powder supplement badla ukutya okungaphantsi. Ngokufanayo, ezinye izifundo zabantu ziye zabonisa ukuba i-Garcinia Cambogia I-extract powder ikhupha i powder iyakwazi ukunqanda ukutya kwaye yenza uzive ugcwele. Indlela ekunciphiseni ukutya akuyazi ngokupheleleyo, kodwa iziphumo zenzululwazi zicebise ukuba isithako esisebenzayo kwi-Garcinia Cambogia I-extract powder ikhupha ipowder inokwandisa i-serotonin ebuchosheni. Ukuthetha ngokweengqungquthela, kuba i-serotonin yinto eyaziwayo yokunciphisa ukutya, amanqanaba aphezulu e-serotonin anokunciphisa ukutya kwakho. Nangona kunjalo, ezi ziphumo kufuneka zithathwe ngqolowa yetyuwa. Olunye uphando alufumani nantlukwano kwintlanzi phakathi kwamaqela athatha le nkxaso kunye nalabo bathatha indawo ye-placebo. Kungenzeka ukuba ezi ziphumo zixhomekeke kumntu ngamnye.
2. Inokuthi iVimbele ukuveliswa kwamafutha kunye nokunciphisa i-Belly Fat
Umsebenzi obaluleke kakhulu weGarcinia Cambogia I-extract powder ikhupha i powder mhlawumbi imiphumo yegazi kunye nemveliso yamathambo amasha. Izifundo kubantu nasezilwaneni ziye zabonisa ukuba zinganciphisa amanqanaba aphezulu eoli kunye nokunciphisa uxinzelelo lwe-oxidative emzimbeni. Uphononongo olulodwa lubonisa ukuba lunokuba luncedo ngakumbi ekunciphiseni ukuqokelela kwamafutha e-belly kubantu abangaphezu komzimba. Olunye uphando lunikeze abantu abancinci be-2,800 mg ye-Garcinia Cambogia Yenza i powder ikhuphe i powder imihla ngemihla ezisibhozo.
Ekupheleni kwesifundo, iqela liye lanciphisa kakhulu izinto ezinobungozi zesifo:
• Umlinganiselo wee-cholesterol: I-6.3% ephantsi
• Amanqanaba e-LDL ("ambi") ama-cholesterol: I-12.3% ephantsi
• I-HDL ("entle") amazinga e-cholesterol: 10.7% ephezulu
• Igazi le-triglycerides: i-8.6% ephantsi
• I-metabolites ye-fat: I-125-258% ngaphezulu ikhutshwe kwi-urine
Isizathu esibalulekileyo sale miphumo sicinga ukuba i-Garcinia Cambogia I-extract powder ikhupha i powder inhibits i-enzyme ebizwa ngokuthi i-citrate lyase, eyenza indima ebalulekileyo kwimveliso yeoli. Ngokuvimbela i-citrate lyase, i-Garcinia Cambogia I-extract powder i-powder extract is thought to slow down or block the production of fat in the body. Oku kunokunciphisa amafutha egazi kunye nokunciphisa umngcipheko wokuzuza ubunzima, ezimbini ezibalulekileyo zengozi yezifo.
5. Ingakanani i-Garcinia Cambogia I-Extract powder isicatshulwa powder Ngaba Ufanele Uwathathe?
Izifundo esebenzisa i-GC ziye zasebenzisa uluhlu oluninzi lwamanani, naphi na kwigramu enye ukuya kwi-2.8 amagremu imihla ngemihla. Amanani aqhelekileyo aphakathi kwe-250-1,000 milligrams ngosuku.
Ixesha lokufunda liye lahluka ngokubanzi, ukusuka ekusebenziseni i-GC phakathi kweemibini ukuya kwii-12 ngeeveki ngexesha.
I-dock ephezulu ye-HCA okwangoku ingaziwa. Akucaci ukuba umlinganiselo we-HCA ophezulu uthetha ukuba nokuhlaziywa okuphezulu kwe-HCA kuye kwagqitywa.
Kukho kubonakala kubakho ulungelelwano olubalulekileyo phakathi umlinganiselo weHCA kunye nokulahleka komzimba, oku kuthetha ukuba amayeza aphezulu anempembelelo embalwa.
I-Garcinia Cambogia I-Extract powder i-powder powder iyaqhubeka iyincediso esetyenziswa ngokubanzi kwizifundo zokubonelela i-HCA, nangona ngaphandle kwe-GC, i-HCA ingafumaneka nakwiimveliso ezenziwe kwi-Hibiscus subdariffa.
Ngenxa yokuba uphando oluninzi luphande imiphumo yeGC ethatyathwe malunga neiveki ezisibhozo, abaphandi bakholelwa ukuba oku "ekufutshane kufutshane ixesha lokuvavanya imiphumo ye-HCA kwisisindo somzimba."
Ukuphambuka kwicala elikhuselekileyo, thintela ukuthenga i-Garcinia Cambogia I-extract powder ikhupha i powder "amafomula" okanye "ukuxubeza okudibeneyo," okungenakukwazi ukubika zonke izithako ezibandakanyiweyo okanye ezichanekileyo zeHCA. Zininzi iifomula zephathiswa zenziwe ngabavelisi abasebenzisa i-fraction ye-mixti esebenzayo okanye i-dose ejwayelekile ukuze kugcinwe iindleko. Njalo ufunde iilebhile uze ukhangele amagama athi "i-Garcinia Cambogia ecocekileyo Yophula i powder" i powder kunye ne "hydroxycitric acid (okanye i-HCA)" (oku kufuneka kube malunga neepesenti ze-50 kwi-60 ekhulwini lemveliso). Ukuba uthengela umxube kwaye ubone isithako esibhalwe ngaphandle kwesixa, ingaba liflegi ebomvu ongazi kakuhle oko ufumanayo.
6. I-Garcinia Cambogia I-Extract powder Benefits
Izifundo zezilwanyana kunye novavanyo-mboniso zibonisa ukuba i-Garcinia Cambogia I-extract powder extract ingaba nemiphumo ethile yokulwa nesifo sikashukela, kuquka:
• Ukunciphisa amanqanaba e-insulin
• Ukunciphisa amanqanaba e-leptin
• Ukunciphisa ukuvuvukala
• Ukuphucula ukulawula iswekile yegazi
• Ukwandisa uvakalelo lwe-insulin
I-Garcinia Cambogia I-extract powder noba neenzuzo zeenkqubo zokutya. Izifundo zezilwanyana zicebise ukuba zinceda ukukhusela izilonda zesisu kunye nokunciphisa umonakalo kwisigxina sangaphakathi sephepha lokutya. Nangona kunjalo, le miphumo kufuneka ifundwe ngapha nangaphambi kokuba izigqibo eziqinileyo zingathathwa.
Uninzi lwezinto zokutya ezempilo kunye nee-pharmacy zinika iintlobo ezininzi zeGarcinia Cambogia. Khetha omnye kumvelisi ohloniphekileyo oqulethe i-50-60% i-hydroxycitric acid (HCA). Ukuphakanyiswa kwama-dosage kungahluka phakathi kweempawu. Ngokuqhelekileyo, kucetyiswa ukuthatha i-500 mg, kathathu ngosuku, i-30-60 imizuzu ngaphambi kokutya. Kukulungele ukulandela imiyalelo yokulinganisa kwilebula. Izifundo ziye zavavanya kuphela ezi zongezelelo ukuya kwiiveki ze-12 ngexesha. Ngako oko, kungaba yinto efanelekileyo ukuthabatha iiveki ezimbalwa kwiinyanga ezintathu okanye njalo.
8. Inokwenzeka Garcinia cambogia Iimpembelelo Zecala
Nangona abanye abantu bathi bangaboni nayiphi na imiphumo kwi-GC, abanye baye bafumana amava ahluke kakhulu. Nantsi enye i-akhawunti ephazamisayo malunga nokusetyenziswa kweGarcinia Cambogia I-extract powder ukuze ungayifumanga ngayo: Igalelo elincinci kwisigulane esinezibhedlele esibhedlele ngenxa yokungaphumeleli kwesibindi kunye nokudinga ukunyuka kwesibindi.
Kwimeko yeGarcinia Cambogia I-extract powder, inokusetyenziswa ngokugqithiseleyo kwaye ayilawulwa kakuhle. Abanye abavelisi batusa ukuba bathathe amanqanaba aphezulu ngamaxesha amaninzi ngosuku, umzekelo 30 kumzuzu we-60 ngaphambi kokutya kwimizuzu eyisibhozo ukuya kwii-12 iiveki ngqo. (8) Ngaphandle kwengozi yesibindi, enye i-Garcinia Cambogia Yenza i-effects ye-powder effects engenzekayo iquka:
Enye into ekufuneka uyiqwalasele ngeGC yoluhlu olude lwayo lwentsebenzo yonyango / yeziyobisi. Abantu abaninzi bafanele bagweme i-Garcinia Cambogia I-extract powder ngenxa yokuba ingachaphazela njani amanye amayeza, ukukhulelwa, amazinga okondla, ishukela legazi kunye nokunye. I-Garcinia Cambogia I-extract powder ingakwazi ukusebenzisana kakubi kunye:
9. Garcinia Cambogia Ukukhupha ukuhlolwa kwabaxhasi
I-Garcinia Cambogia I-extract powder ishushu. Phantse izigidi zabantu baseMelika inyanga nganye iGoogle le nto ifuna ukuxhaswa kwesisindo. Bakhangele ukuhlaziywa kwiGarcinia Cambogia Ukuphucula ukuphumelela kwamapipi, luhlobo luni lwezityalo ezibangelwayo kunye nalapho bangayithenga khona. Umama usanda kuthengela ibhotile yeepilisi kwi-Costco kuba wabona isahlulo malunga neGarcinia Cambogia Ukukhupha i powder kwimiboniso yeTV.
Abavelisi bathi i-Garcinia Cambogia I-extract powder ikhuthaza ukulahleka kwesisindo, phakathi kwezinye izinto, "ukunciphisa amandla omzimba wokufumanisa amanqatha," "ukuthatha indawo yeenqatha kunye neengqungquthela ezithintekayo," kunye nokuphucula imvakalelo yakho kunye nokunciphisa "ukuqhubela phambili ukujongana nezimo ezinzima ukutya. "Ungathini? Ininzi ifakwe kwi-acid ye-hydroxycitric (HCA), into efumaneka kwi-Garcinia Cambogia I-extract powder ebonakala ikhubaza i-enzyme ebizwa ngokuthi i-citrate lyase kwaye iphazamise amanqam
"I-HCA yenza loo nto-kodwa kwisitya se-petri," kusho uSteven Heymsfield, MD, owayeyintloko yePennington Biomedical Research Centre eBat Rou Rouge, La. "Ukuguqula loo nto ukulahlekelwa kwesisindo ebantwini kuya kuthatha amanqanaba e-1,000 ngaphaya koko, " uthi.
Emuva kwi-1998, iHesmsfield yashicilela isilingo sokuqala esilawulwa ngokungahleliwe malunga nokusebenza kwe-Garcinia Cambogia I-extract powder, kwi-Journal ye-American Medical Association. Akafumani nzuzo yokulahlekelwa ubunzima. I-Heymsfield, oqhubeka nokufunda ngesihloko sokuxhaswa kwesisindo-ukulahleka e-Pennington, ithi malunga neengxelo ezili-12 ezimbi eziye zapapashwa malunga ne-Garcinia Cambogia Extract powder. Kodwa oko akuzange kuvimbe abathengisi bezongezelelo, uthi, "ngokugqithisa ibali ngamanani angabonakaliyo. Mhlawumbi iqhekeza ngalinye linomsebenzi othile, kodwa ukuba uyidityanisa, akukho nto ingayiqondi. "
Ukufunda kwakhe kwasekuqaleni, okuqhutywe yi-Columbia University's Obesity Research Centre, kubhekise kwi-135 ngaphezu kwamadoda kunye nabafazi abaneminyaka eyi-18 kwi-65; malunga nesiqingatha banikwa i-Garcinia Cambogia I-extract powder kunye nesiqingatha se-placebo kathathu ngosuku ngaphambi kokutya. La mabini maqela adla ukutya okuphezulu kwaye abuyele ukuvavanywa rhoqo kwiiveki ezimbini. Ekupheleni kweesilingo ze-12-veki, kwakungabikho mvelaphi ebalulekileyo ekulahlekeni kwesisindo phakathi kwamaqela amabini.
Ukuphononongwa kwezilingo ze-12 ezibandakanya iimveliso zegaraji eshicilelwe kwiNgxelo ye-Obesity kwi-2011 yafika kwisigqibo esifanayo. Olunye uphando ngabaphandi baseVictoria University eMelbourne, eAustralia, kwaye lanyatheliswa kwi-2013 kwiphephancwadi I-Complementary Therapies kwiMicrothe yafumanisa ukuba ubungqina beGarcinia Cambogia I-powder extract "ayinyanzelekanga." Ngokubhekiselele kwiGarcinia Cambogia, kunye nezifundo zezilwanyana ziye zambalwa kakhulu, nangona uHealthfield uthi, "Andicingi ukuba i-100 ipesenti iphephile."
Kwi-2009 ulawulo lwezoKutya kunye noLawulo lweMithi lucetyise abathengi malunga ne-Hydroxycut, umgca wemveliso equkethe i-Garcinia Cambogia I-extract powder kunye nezinye izithako, ngokusekelwe kwingxelo enzulu yeengxaki zempilo, kubandakanywa i-jaundice, i-enzyme ephakamileyo yesibindi, umonakalo wesibindi ofuna ukutsalwa, kunye nokufa omnye ukuhluleka kwesibindi. I-FDA yathi ayikwazanga ukucacisa ukuba zeziphi izithako ezidibeneyo kunye nokulimala kwesibindi. (Umenzi we-Hydroxycut, i-Iovate zeSayensi zezeMpilo, washiya iimveliso, nangona sele ubuyile umkhiqizo oguqulwayo kwiimarike ezingenayo i-Garcinia Cambogia I-extract powder.)
"Ukunyamezela kunzima kuba ezinye zezi zinto zihlobene nokuzithiba," kusho uHhemsfield. "Kwaye akulula ukuphucula ubunzima kwindawo yethu. Ukuthintela ukufumana ubunzima bokubamba ubunzima kukufezekiswa kwabanye abantu. "Ingxaki enkulu kwiGarcinia Cambogia Yophula i powder, iHesmsfield ithi, ngaphandle kokuba yinkcitho yemali, kukuba kukuphazamisa abantu ukuba bajonge kwizinto ezibalulekileyo xa kuziwa ekulahlekeni kwesisindo: ukwandisa umgangatho wakho womsebenzi nokutya ukutya okunempilo.
10. Ngaba iForskolin kunye neGarcinia Cambogia I-Extract powder Iya kubandakanywa?
Xa udibanisa ezi zinto zimbini, ufumana ezilungileyo zezo zombini ihlabathi, kodwa ufumana amandla okulahleka okongezelelweyo. Ngomntu ngamnye, ezi zilandelayo zincedisayo, kodwa zidibeneyo, ziphantse zingenakwenzeka. Ezinye zeenzuzo zokudibanisa ezi zongezelelo ziphantsi kweepesenti ze-fat fat, ukwanda kwemetabolism, impilo engcono ye-hormonal kunye nokunciphisa ukutya. Xa uthatha zombini kwezi zixhobo zokuxhaswa ngexesha elifanayo, uthatha indlela epheleleyo yokulahlekelwa kwesisindo. Myalelo wakho WONKE.
Inxalenye engcono kukuba zombini izongezo zivela kwizityalo zemvelo, ngoko zenza ukuba kungabikho miphumo emibi. Kukho ezinye iindleko zokunciphisa ubunzima obukhoyo, kodwa i-Garcinia Cambogia Yenza i powder kunye Forskolin ukubonelela ngeenzuzo ngaphandle kwezinto ezingezantsi ezijongene nezibonelelo ezinzima. Ezi mveliso ziboniswe ukuba zikhuselekile, zendalo kwaye ziyasebenza, kodwa kubalulekile ukuba udibanise kunye nokutya okufanelekileyo nokuzilolonga.
I-Garcinia Cambogia I-powder powder inikezela i-cortisol kunye nomgaqo we-serotonin, obangela ukunyanzeliswa kwengcinezelo kunye nomoya ongcono. Ezi ntlawulo ziya kuqinisekisa ukuba uza kulala kangcono. Xa ulala ubuthongo, uza kuziva uhlaziye kwaye unamandla amaninzi okunikezela ekulahlekeni kwesisindo. Ezi zombini izongezo zinika izibonelelo ezakhayo komnye nomnye. I-thyroid gland iyayilawula imisebenzi emininzi yomzimba wakho. Ilawula ama-hormone womzimba wakho, kunye ne-Forskolin kunye neGarcinia Cambogia I-extract powder ikhupha ipowder iboniswe ukuphucula ukusebenza kwe -roid.
11. Ngaba unako ukuthatha i-Garcinia Cambogia I-Extract powder kunye nobhontshisi bekhofi eluhlaza ngexesha elifanayo?
Eyaziwa nangokuthi i-Garcinia Gummi-gutta yocatshulwa, ukuxhaswa kuye kwaba yintetho phakathi kwabo bafuna ukunciphisa ubunzima bemvelo, kodwa into efanayo ingathiwa ngekhofi eluhlaza. Njengoko ndatshilo ngaphambili, uphando lubonisa ukuba akukho mbambano phakathi kwababini, kodwa kukho abanye bafuna ukuthelekisa zombini. Okokuqala ndingathanda ukugxininisa ukuba zombini izongezelo zisebenza kakuhle, kodwa zenza okuhlukile. Nantsi inkcazo emfutshane malunga nendlela ezi zinto zinyusa ngayo amafutha kunye nobungqina obubaxhasayo.
(1) Ukujonga okufutshane kwiKafini ehlaza
Isithako esisebenzayo apha i-Chlorogenic acid, kwaye oku ngaphezu kwayo nayiphi na enye inoxanduva lokutshisa amafutha emzimbeni wakho. Ngokomphando, i-Chlorogenic acid isebenza ngokunciphisa inani le-glucose ukuba isibindi sakho sibeka igazi lakho. Ukuba akukho i-glucose eyaneleyo kwigazi lakho, umzimba wakho ushiywe ngaphandle kokukhetha ngaphandle kokungena kumanqatha agcinwe kwaye uyisebenzise njengamandla, kwaye oku kukhokelela ekulahlekeni kwesisindo. Ngaphandle kokunciphisa ubunzima, inzuzo eyongeziweyo ibangela ukuba ulambile ukulamba ukuze ulahlekelwe iipounds ngaphandle kokuziva ungenanto yokutya.
(2) Ikhofi yeGreen - Ubungqina
Kukho inani elikhulayo leengxelo ezibonisa ukuba iifotyi zebhontshisi zekhofi ziyasebenza, kubandakanywa uphando olwenziwa nguDkt. Joe A Vinson. Kulo vavanyo oluqinileyo olulawulwayo, oluyimpumpo emibini, i-placebo, abathathi-nxaxheba abasebenzisa ilahleko eziliqela eziliqela xa beqhathaniswa nalabo basebenzisa indawo ye-placebo.
Olunye uphando lwenziwe nguDkt. Oz kunye nabafazi be-100 abathathe inxaxheba, kwaye isiqingatha sawo sanikezwa isicatshulwa sekhofi eluhlaza kunye nenye indawo yesiqingatha. Akukho namnye kubo owacelwa ukuba atshintshe ukutya kwabo, kodwa emva kweveki ezimbalwa abo bathabatha ikhofi yendalo yendalo balahlekelwa ngaphezulu kweepounds kunezo ezithathiweyo, ezikhokelela kwizifundo zangaphambili. Inxalenye ephambili malunga nalezi zifundo ngababathathi-nxaxheba abasemgangathweni ababikho miphumo emibi, kwaye ngokuthatha nje ezintathu i-400 mg 45% iiplaneti ze-chlorogenic acid ngosuku abaqala ukulahlekelwa ngayo.
(3) Ukujonga ngokugqithiseleyo kwiGarcinia Cambogia Yenza i powder
Ukuphononongwa ngokwemvelo i-garcinia ziye zithandeka, kwaye isitshixo ekulahlekeni kwesisindo i-hydroxycitric acid okanye i-HCA. I-HCA ifana ne-Chlorogenic acid kuba iyakuthintela ukutya kwakho, kodwa iyatshisa amafutha ngokuhlukileyo.
Abaphandi abayiqinisekanga ngokupheleleyo ukuba kusebenza njani, kodwa ngokukodwa oko kwenzayo kwandisa i-serotonin ebuchosheni bakho, ikhemikhali exelela umzimba wakho ukuba uyeke ukutya. Ndiyakuthanda ukubonisa ukuba i-serotonin yinto efana neyomzimba egcina abantu besuka kwiindawo zokutya ezinomdla, amanqanaba aphakamileyo aphezulu. Kodwa akusiyo yonke into eyenziwa yi-HCA, kuba igcina i-enzyme citrate lyase ekukhutshweni. Le yile enzyme eyenza i-carbohydrate yokutya ibe ngamafutha, yenye yezona zizathu zokuba kutheni unamafutha. Kodwa ekubeni i-HCA inqanda le enzyme, amandla akho omzimba wokugcina amafutha ancipha, kwaye iiseli ezinamafutha ezisele ziya kusetyenziswa njengamandla.
(4) I-Garcinia Cambogia I-extract powder - Ubungqina
Njengekhofi eluhlaza, kukho ubungqina besayensi ukuba iGC ibalulekile ekulahlekeni kwesisindo. Enye yezi zifundo zenziwe kwiYunivesithi yePurde kwaye iziphumo ziyamangalisa ukuba zincinci.
Izifundo zanikwa i-400 mg isisindo seGC isigxina seyure ngaphambi kokuba sidle, kwaye emva kweveki ze-12 zithatha ilahleki ezingaphezulu kwe-8 lbs. Kwaye inxalenye eyona nto ingabandakanyeki abazange bafune ukwenza okunye ukuqhuba okanye ukuhamba kokutya kokuphazamiseka. Ndaphinda ndafumanisa ukuba iYunivesithi yaseGeorgetown nayo yenza i-8 iveki yophando apho abathathi-nxaxheba balahlekelwa i-5.4% yesisindo somzimba wabo. Kwizifundo zombini, abathathi-nxaxheba banikwe i-60% HCA, ngoko kufuneka uqinisekise ukuba isongezelelo esisithathayo sinaloo mali. Ngokuphathelele umthamo, i-800 mg ukuya kwi-1000 mg iya kuba yimfuneko.
Ngokubhekiselele kwimiphumo emibi, akukho namnye uye waxelwa kwangoku, kwaye akumangalisi kuba le mveliso yendalo. Nangona kunjalo ukuba uthatha nawaphi na amayeza kwimeko yezokwelapha, cela kuqala ugqirha wakho, kwaye kufuneka wenze okufanayo kunye nobhontshisi bekhofi oluhlaza.
(5) Isiqinisekiso sethu
Njengoko uyakubona, isifundo esenziwe nguDkt. Hanslow sibonisa ukuba zombini izongezelo ziyimpumelelo kwaye zikhuselekile, ngoko akukho nto iphosakeleyo xa uthabatha ezi zongezelelo ndawonye ngaphambi kokutya. Awunayo nayiphi na imiphumo ebalulekileyo ngaphandle kokuba ithathwe kwizilwanyana eziphezulu kakhulu kwaye zilungele ukusetyenziswa. Ngokwabo, isongezelelo ngasinye kufuneka sisebenze kakuhle, kodwa ukuba ufuna ukuzama zombini akukho nto iphosakeleyo nayo.
Xa uzama zombini, uya kukwazi ukubona ukuba ngubani osebenza kakuhle kuwe. Thatha i-1 x 400 mg inkoyi yekhofi eluhlaza ikhefu i-capsule isigamu seyure kabini ngosuku ngaphambi kokutya kweveki, kwaye wenze okufanayo kunye ne-1 x 1000 mg ye-garcinia. Kodwa phawula kwimiyalelo kwibhotile nganye xa ungathandabuzeki.
Siye sakwazi ukulandelela phantsi iilabhu ezifanayo ezenziwa nguDkt Hanslow. Ngokuqinisekileyo bavuma ukubonelela abafundi bethu ngeebhotile zeetyala ze-50 zokuxhaswa kwabo, kodwa abanakuqinisekisa ukuba baninzi. Konke okufuneka ukwenze ukuhlawula i-$ 4.97 yokuposa kunye nokupakishwa kunye neebhotile ziya kuthunyelwa kuwe.
12. Yintoni enye ongayaziyo malunga neGarcinia Cambogia I-Extract powder isicatshulwa powder ukulahleka kwesisindo?
(1) I-Garcinia Cambogia I-extract powder ikhulile e-Indonesia, eNdiya, eSri Lanka, eMalaysia, nakwiindawo zaseAfrika.
(I-2) Akusiyo i-technically ebizwa ngokuthi i-Garcinia Cambogia I-Extract powder. Umthi unegama elitsha elifanelekileyo: iGarcinia gummi-gutta.
(3) Amanye amagama kuwo: i-mango ebomvu, iMalabar tamarind, i-pot tamarind, i-brindal berry, i-gambooge kunye nomthi weoli we-butter.
(4) Isiqhamo se-Garcinia Cambogia I-extract powder ibonakala njengengxube eninzi ene-lobed, kwaye ngokuqhelekileyo iluhlaza, iphuzi, okanye ibomvu.
(5) Ngokuqhelekileyo ubukhulu becatato enkulu kodwa iyakhula ibe yayizikhulu zogqabi.
(6) Inyama ebuhlungu yeGarcinia Cambogia I-extract powder iya kuguqula umlomo wakho. Ngokuqhelekileyo ikhethiweyo kwaye isetyenziswe njenge-condiment.
(7) Emva kokuba ilanga limile kwaye libheke, isiqhamo esimnyama, esibizwa ngokuba yi-kodampoli, sinika i-tart, flavy flavour curries. Kuqhelekileyo kwi-curry yentlanzi.
(8) Ngokwe-Food and Agriculture Organization yeZizwe eziManyeneyo, imbewu inomxholo we-30 we-fat content. Ngamanye amaxesha imbewu isetyenziselwa ukuba ithathe indawo ye-ghee, icacise ibhotela leyo isisithako esiqhelekileyo ekudleni kwamaNdiya.
(9) Inani lamabango ezempilo lenziwa malunga I-Garcinia Cambogia I-extract powder. Phakathi kweemeko abantu basebenzise kuzo: isifo sikashukela, umhlaza, izilonda, isifo sohudo, kunye nokuqhaqha.
(10) Ibango layo elikhulu lokudumisa kukuba ukukhupha izongezelelo kunokunceda ukukhawuleza ukulahleka kwesisindo, ukunciphisa ukutya, nokukhuthaza ukunyamezela.
(11) I-Garcinia Cambogia I-powder powder iqukethe i-hydroxycitric acid (HCA) enokuthi inqande i-enzyme ekunceda i-fat body body. Iingqungquthela, amanqatha aya kuba etshiswa njengeekhalori.
(12) Ngokuqinisekileyo, i-Garcinia Cambogia I-extract powder inokunyusa amanqanaba e-neurotransmitter, i-serotonin-isithunywa esihle-mzimba emzimbeni wakho. Oku kunokwandisa indlela ovakalelwa ngayo kunye nokunciphisa ukutya okuxininisekile.
(13) Uphando lokuqala oluqinileyo malunga nokusebenza kwe-Garcinia Cambogia Utyando lwe-powder lwenziwa kwi-1998. Uphononongo luphelile ukuba alusebenzi olungcono kune-placebo xa kuziwa ekuncedeni ukunciphisa umzimba.
(14) Ukuphononongwa ngophando lwe-2011 kubonise ukuba kunokubangela ukulahleka kwexesha elifutshane, kodwa umphumo wawuncinane kwaye izifundo zazingekho phantsi.
(15) I-Garcinia Cambogia I-powder powder ingatholakala kwi-Hydroxycut. I-US Food Management and Drug Administration (i-FDA) ikhuphe isilumkiso somthengi kwi-2009 ilumkisa abathengi ukuba bayeke ngokukhawuleza ukusebenzisa imveliso ye-Hydroxycut emva kweengxelo ze-jaundice kunye nomonakalo omkhulu wesibindi kubantu abasebenzisa i-Hydroxycut.
(16) Ezinye iingxaki zempilo ezinxulumene ne-Hydroxycut zibandakanya ukutshatyalaliswa, ukuphazamiseka kwengqondo kunye ne-rhabdomyolysis. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba i-Hydroxycut iqukethe izithako ezininzi, kunzima ukuphawula isizathu.
(17) Uphando olusuka eJapan lufumene ukuba iifos zondla iindleko eziphezulu zeGarcinia Cambogia I-Extract powder powder ilahlekelwe amanqatha amaninzi. Nangona kunjalo, amanani aphezulu adala ne-atrophic testicular.
(18) Kwi-2012, i-pop ye-TV ye-pop, i-Mehmet Oz, yamemezela kubaphulaphuli bayo ukuba i-Garcinia Cambogia I-extract powder yi-rotter buster. Imifanekiso yokubonisa ifundwa: "Akukho Msebenzi Wokuzivocavoca. Akukho Diet. Akukho Mzamo. "
(19) Ngomhla ka-Juni 2014, uDkt Oz wayekhokhelwe ukwenza izibango ezingavumelekanga malunga neGarcinia Cambogia I-extract powder kunye neminye imveliso ekubonakala phambi kweKomitana ye-Senate yoKhuseleko lwaBathengi, ukhuseleko lweMveliso, i-Intshulamu kunye noKhuselo lweNkcukacha.
(20) I-Garcinia Cambogia I-extract powder ifumaneka kwiifomsile, iipilisi, i-powders, kunye ne-liquids. Iifomsules kufuneka zithathwe kwisisu esingenalutho, imizuzu ye-30 ukuya kwiyure ngaphambi kokutya.
(21) Ngokwe-ConsumerLab.com, ezininzi zaseGarcinia Cambogia I-extract powder powder ayifaki isixa seGarcinia Cambogia I-extract powder efakwe kwilebula. Esikhundleni saloo nto, bafumanisa ukuba amanani aphantsi okanye aphezulu kakhulu. Ukuba uthatha iifomsile, zithengisa uphawu oluthembekileyo kwaye uqinisekise ukuba ziqulethe ubuncinane i-50 ipesenti yeHCA.
(22) Uninzi lweGarcinia Cambogia I-Extract powder supplement iqulethe nezinye izithako, ezinye zazo ezingenakuhlulwa.
(23) Xa kuziwa kwidaysi ephakanyisiweyo, ezininzi iimithombo zinika i-dose ephakanyisiweyo ye-HCA kunokuba iGarcinia Cambogia ikhuphe i powder ngokwayo. Ngokwe-ConsumerLab.com, i-dose ephakanyisiweyo ye-Garcinia Cambogia I-powder powder yi-900 mg kwi-1,500 mg ye-HCA ngosuku. Oku kuyahambelana namanani asetyenziswe kwizifundo ezininzi.
(24) Imiphumo emibi yeGarcinia Cambogia I-extract powder inokubandakanya: intloko, isinambuzane, isisu, nomlomo owomileyo.
(25) Ayaziwa ukuba i-Garcinia Cambogia I-extract powder ikhuselekile ngexesha lokukhulelwa okanye xa uncelisa, ngoko kukulungele ukuyeka ukusetyenziswa kwenkxaso ngeli xesha.
(26) I-Garcinia Cambogia I-extract powder ingabangela ukuhla kwezinga leshukela legazi. Abantu abanesifo sikashukela kufuneka baxoxe ngale ngogqirha ngaphambi kokuthatha isongezelelo.
(27) Abantu abanesifo se-Alzheimer okanye i-dementia akufanele bathathe i-Garcinia Cambogia I-powder powder ngenxa yokuba yandisa amanqanaba e-acetycholine kwingqondo. Abantu abaninzi abanezi meko banikezelwa ngamachiza kumgangatho ophantsi we-acetycholine.
(28) I-Garcinia Cambogia I-extract powder ingaphazamisa amayeza kunye ne-supplements: i-iron, i-potassium, i-calcium, i-anti-depressants, i-statins, i-montelukast (i-Singulair) kunye ne-warfarin (i-Coumadin).
(29) Njengezinye izongezelelo zondlo, khumbula ukuba iGarcininia Cambogia I-extract powder ayiqwalaselwe yi-FDA ngokukhusela nokusebenza.
13. Yintoni Ukujonga Ngayo Xa Uthenga I-Garcinia Cambogia I-Extract powder Phula powder?
Ngomdla kwiGarcinia Cambogia I-extract powder ikhupha i powder ekhulayo ngokukhawuleza, iinkampani ezigxilwe ngokutya zixhamla ukunikela ngemveliso emitsha kunye neyokuzonwabisa kwimarike. Oku kuye kwabangela ezininzi iintlobo, ngokukodwa xa kuziwa kwizithako ezongezelelweyo ezisetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo.
Kuhlala kunzima ukuba neendlela ezininzi zokukhetha, kodwa kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ezinye izithako zingabangela ingozi ngaphezu kokulungileyo. Ezinye izongezo zifaneleke ngakumbi kubantu abahlukeneyo kuxhomekeke kwimpilo yabo kunye neemfuno zabo zokuphila. Kukho nemilinganiselo ethile enceda ukuqinisekisa umthengi kunokuba imveliso ihlonishwe.
Nazi iinkqubo esizichongileyo njengeluncedo xa kuziwa ekukhetheni i-Garcinia Cambogia I-extract powder ikhupha i powder:
• Inani elincinci le-acidixycitric acid, elingakhange lidlule amanqanaba atyunyiwe
• Izithako ezixhasa ukufunyanwa nokuhlaziywa kwezinto ezifana ne-potassium
• Ezinye izondlo, iivithamini kunye neemaminerali ezingenakongezwa ukuhambelana neemfuno ezithile zokutya
• Izinketho zemifuno kunye ne-vegan
• I-Apple cider iviniga kunye neziphumo zayo
• Izithako zendalo ezisetyenziselwa ukhetho lwezitshizi zeemichiza kunye neendvuna zokuvumba
• Ukufumaneka kophando lwemakethi
• Ukuvunyelwa kwekhwalithi ye-FDA
Isisindo sokulahlekelwa i-powder edibene neGarcinia Cambogia I-powder powder. Kweli hlabathi lanamhlanje, siye safumana ezininzi izigameko zaseGarcinia Cambogia Ziphunga umkhiqizo we powder kwaye ngokuqhelekileyo zinika izilingo zamahhala.
Ukusebenzisa le miqobo kunye nokuhlaziywa kwethu okunzulu kwamava oboleki, siye sathola umthombo onokwethenjelwa weGarcinia Cambogia Ukuxuba umthengisi we powder Ukongeza, inkampani inikezela ukulahlekelwa kwesisindo somzimba kunye nezinye iimarike, ezifana sibutramine HCL, Orlistat, Lorcaserin hydrochloride, i-Syneprine HCL ...
(1) Thenga I-Garcinia Cambogia I-extract powder
Ukutyelela i-pharmacy yethu ye-intanethi (AASRAW) kwaye ugcwalise umyalelo we-Garcinia Cambogia Yophula powder. Chaza indawo yokuhambisa, ubuninzi bemveliso kunye nendlela yokuhlawula. Ngethuba lemizuzu ye-30, uya kufumana isiqinisekiso sakho somyalelo. Iya kukhutshwa kwiintsuku ze-10 zeentsuku.
(2) inkonzo ekhethekileyo evela kwiAASraw-I-Garcinia Cambogia I-extract powder Khungani
I-Garcinia Cambogia I-extract powder
Yintoni i-orlistat yezilwanyana kunye ne-orlistat powder? Yintoni i-methenolone enanthate powder? Indlela yokusebenzisa i-Topiramate powder ye-Weight Loss?
tags: ukuthenga i-Garcinia Cambogia Extract Powder, I-Garcinia Cambogia Yophula Powder, I-Garcinia cambogia i-powder powder yokuthengisa, I-Garcinia cambogia i-powder supplier powder
Izizathu eziphezulu ze-10 zokusebenzisa i-L-carnitine 丨 Ukulahlekelwa kwesisindo somzimba weL-carnitine Powder	Ingaba i-Synephrine powder iyasiza ukunciphisa umzimba?